Nasi look at ezinye the best ikhofi iziphuzo ukuthi ungathola emakethe namuhla. Phezulu ohlwini lwethu Keurig, The Original Donut Shop Regular, Medium Extra Bold, K-Cup amaphakethe, 72 ukubala. Lokhu ikhofi ukuthi has a ukunambitheka-enamandla umnyuziki. Iphinde kunambitheka nesibindi esikhulu ine flavour omuhle kanye. Nendebe lokhu ikhofi wokuphuzwayo omuhle Liyoba okunomsoco ngempela.
The Keurig, Medium Extra Bold
The Keurig, Medium Extra Bold, kuba medium ikhofi eyosiwe okuye eqinisekisiwe ukuba Kosher. Njengoba for usayizi count, kuziwa emabhokisini eziyisithupha, ngalinye kweshumi K-indebe amaphakethe ngokuphelele ayisikhombisa nambili K-indebe amaphakethe zonke. Kungakhathaliseki ukuthi ungumuntu othanda sendebe yabo ekuseni yekhofi noma ngisho uma nje uphuze ikhofi ukugubha isenzakalo, uya ukuthanda lokuphuza lesi siphuzo coffee.
The San Francisco Bay OneCup, 80 Single ukukhonza zekhofi siyinhlanganisela kokubili Central kanye zekhofi South American. Lokhu ikhofi kuyosiza ususe ekuseni inkungu yakho. Lokhu ikhofi has a ukunambitheka enamandla full futhi kuba excellently olinganiselayo. The San Francisco Bay OneCup kuyavumelana futhi zonke elikulesi Keurig K-Cup kanye nanoma elikulesi ehambisanayo single ukukhonza. Nokho, asikwazi kusetshenziswe khetha Keurig abawenzayo. Uma uthenga lokhu isiphuzo ikhofi uya kahle kuthinta izimpilo zabantu abasebenza emapulazini ezingxenyeni ezahlukene zomhlaba. Yini more, ubhontshisi ikhofi arabica asetshenziswa lokuphuza lesi siphuzo ikhofi kukhona okungcono ukuthi ungathola. Iphuzu liwukuthi lokuphuza lesi siphuzo ikhofi mkhulu nje kuphela ukuphuza kodwa futhi zahlanganiswa ngo emaphaketheni okubolayo. Manje, uma ukujabulela ukukhonza ikhofi wakho ongayedwa ungenza kanjalo ngaphandle kokuzizwa kabi ukuthi neqhaza ukungcola.
Coffee Izinhlobonhlobo Sampler pack
Uma ukuthenga Coffee Izinhlobonhlobo Sampler ukupakisha uya ukuthanda leli bhokisi ikhofi njengoba inikeza izinkomishi ezahlukene ikhofi kwansuku zonke. Uthola amane ezahlukene single ukukhonza izinkomishi ikhofi enongiwe ezivela brand ezahlukene phezu nesishiyagalombili. Ingxenye best wukuthi awukaze uthole brand ngeduplikhethi. Ungasebenzisa lokhu isiphuzo ikhofi nanoma elikulesi ukuthi kuyahambisana Keurig K-cup. Uma edayiswa, uthola ukuthenga imikhiqizo ehlukene kuhlanganise nalabo like Crazy izinkomishi Eko izinkomishi kanye nezinye eziningana brand ethokozisayo.
Nespresso Izinhlobonhlobo Pack Amaphilisi Abonayo
The Nespresso Izinhlobonhlobo Pack Amaphilisi Abonayo iyona engcono ikhofi yokuphuzwa ubani ubelokhu esebenza isikhathi noma ngubani ukufunda i-exam oluzayo. Lokhu ikhofi kukunika isipiliyoni ultimate futhi kuzokusiza uhlale uphapheme futhi uyohlale ugxile amahora on kuphele ngaphandle kokudinga sikhathazeke ngokuthi uya ukuzizwa ukhathele futhi avilaphe noma sihlupheka side effects. Ibhokisi ngasinye siqukethe amaphilisi eyishumi emunye for a flavour ezahlukene. Kuyinto futhi kuyavumelana zonke uhlobo lomshini Nespresso futhi esivumelana kakhulu asetshenziswe isilinganiso ikhofi ophuzayo.